တာချီလိတ်တွင် နေ့ခင်းကြောင်တောင် သေနတ်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွား၊ မီးနီစောင့်နေသည့်ကားပေါ်မှ ယာဉ်ေ?? - Yangon Media Group
တာချီလိတ်တွင် နေ့ခင်းကြောင်တောင် သေနတ်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွား၊ မီးနီစောင့်နေသည့်ကားပေါ်မှ ယာဉ်ေ??
တာချီလိတ်မြို့ အာခါဈေး မီးပွိုင့်လမ်းဆုံ၌ နေ့ခင်းကြောင်တောင် ဆိုင်ကယ်စီးနှစ်ဦးက သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ်မှုကြောင့် တစ်ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း)၊ တာချီလိတ်မြို့နယ်၊ ပါဆပ်ရပ်ကွက်နေ တပင်ရွှေထီး ဆီပန့်ပိုင်ရှင် ဦးအာဖာ(၅၁)နှစ် မောင်းနှင်ပြီး အမျိုးသမီးလေးဦး လိုက်ပါစီးနင်းလာသည့် Land Cruiser အဖြုရောင်မော်တော်ယာဉ်သည် ဇန်နဝါရီ ၂၉ရက် မွန်းလွဲ ၁ နာရီခန့်က တာချီလိတ်မြို့ အာခါဈေးမီးပွိုင့်လမ်းဆုံတွင် မီးပွိုင့်မီးနီကိုစောင့်နေစဉ် လူနှစ်ဦးစီးနင်းလာသည့် အပြာရောင် ဆိုင်ကယ်မှ Land Cruiser ကားအနီးသို့ ရောက်ရှိလာကာ ဆိုင်ကယ်မောင်းနှင်သူက သေနတ်ထုတ်ပြီး ခြောက်ချက်ခန့်ပစ်ခတ်သွားသဖြင့် ယာဉ်မောင်းဦးအာဖာ၏နားထင်၊ နံစောင်း၊ ဝမ်းဗိုက်နှင့် လက်မောင်းတို့တွင် ဒဏ်ရာများရသဖြင့် တာချီလိတ်ပြည်သူ့ဆေးရုံ သို့ပို့ဆောင်စဉ် သေဆုံးခဲ့ကြောင်း၊ ယာဉ်ပေါ်တွင်လိုက်ပါလာသူ အမျိုးသမီးလေးဦးမှာ ဒဏ်ရာမရခဲ့ကြောင်း တာချီလိတ်မြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့ထံမှ စုံစမ်းသိရသည်။
အခင်းဖြစ်ပွားသည့်နေရာအနီးမှ ဈေးသည်တစ်ဦးက”ကျွန် တော်တို့ဖြစ်တဲ့နေရာအနီးမှာ ဈေးရောင်းနေတာ။ သေနတ်သံကြားလို့ လှမ်းကြည့်မိတော့ ဆိုင်ကယ်တစ်စီးမှာ ဦးထုပ်ဆောင်းထားတဲ့ လူနှစ်ယောက် Wave 110 အပြာရောင်နဲ့ရောက်လာပြီး ကားနားကပ်ပြီး ပစ်ခတ်ထွက်ပြေးသွားတာ။ ဆိုင်ကယ်နံပါတ်တော့ သေချာ မတွေ့လိုက်ရဘူးဗျ။ သေနတ်သံတော့ လေးငါးချက်ကြားလိုက်ရတာပဲ”ဟု ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ ဇန်နဝါရီ ၂၉ ရက်က ပြောသည်။ အမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး တာချီလိတ်မြို့မရဲစခန်းမှူးဒုရဲမှူးမျိုးခိုင်က ကျူးလွန်သူများကို လိုက်လံဖမ်းဆီးနေကြောင်း ပြောသည်။
ယင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး တာချီလိတ်မြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ရဲအရာရှိ တစ်ဦးက ”ကျွန်တော်တို့ အခုလိုက်လံစုံစမ်းနေတယ်။ မြို့စွန်မှာ နေ့ ခင်းကြောင်တောင်ဖြစ်သွားတာ။ သေဆုံးသူက သူဌေးတစ်ဦးလို့သိရတယ်။ ကျူးလွန်သူကိုမိမှ ဘာကြောင့်သတ်လဲဆိုတာသိရမယ်။ လက်ရှိမှာ ပိတ်ဆို့ဖမ်းဆီးနေတယ်။ မမိသေးဘူး”ဟု ပြောသည်။ ယင်းသေနတ်ဖြင့်ပစ်သတ်မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး တာချီလိတ်မြို့မ ရဲစခန်းမှ (ပ)၅ဝ/၂ဝ၁၉၊ လူသတ်မှုပုဒ်မ ၃ဝ၂၊ အားပေးကူညီမှုပုဒ်မ ၁၁၄ဖြင့် ကျူးလွန်သူများကို အမှုဖွင့်ထားသည်။
အန်ဝါအီဘရာဟင် ထိုင်းနိုင်ငံရောက်ရှိစဉ် ထိုင်းတောင်ပိုင်း သူပုန်များကိစ္စ ကူညီဖြေရှင်းပေး??